Ndi edi idiọkn̄kpọ ndibụp Abasi? | Ahụrụ m Jizọs n'anya
di Paolo Tescione - Disemba 6, 2020
Ndị Kraịst nwere ike ịgbalị ịlụ ọgụ maka ihe Akwụkwọ Nsọ na-akụzi banyere ido onwe ha n'okpuru Akwụkwọ Nsọ. Withgba mgba nke ọma na Akwụkwọ Nsọ abụghị naanị ọgụgụ isi, ọ gụnyere obi. Ndikpep Bible kpọt ke udomo esịt esinam owo ọdiọn̄ọ nnennen ibọrọ ye unana edida akpanikọ Ikọ Abasi nsịn ke edinam. Iguzogide Akwukwo nso putara itinye aka na ihe o kwuru site na ọgụgụ isi na n'ime obi iji nweta mgbanwe nke ndu site na Mo nke Chineke ma were nkpuru maka otuto nke Chineke.
Jụ Onyenwe anyị ajụjụ abụghị ihe ọjọọ n’onwe ya. Habakuk onye amuma nwere ajuju banyere Onye-nwe-ayi na echiche Ya, ma karia iba ya mba nye ajuju ya, oza aziza. O mechibidoro akwukwo ya site n’iburu Onye nwe anyi abu. Ajuju ajuju ajuju nke Onye-nwe-ayi n’ime Abù Ọma (Abù Ọma 10, 44, 74, 77). N’agbanyeghi na Onye-nwe-anyị anaghị aza ajuju dịka anyị chọrọ, Ọ na-anabata ajụjụ nke obi ndị na-achọ eziokwu n’ime Okwu Ya.
Ka osi di, ajuju ndi n’aju ajuju banyere Onye-nwe-ayi ma ajuju banyere akuko nke Chineke bu nmehie. Ndị Hibru 11: 6 kwuru n'ụzọ doro anya na "onye ọ bụla nke na-abịakwute ya aghaghị ikwere na ọ dị adị nakwa na ọ na-akwụghachi ndị ji ezi obi na-achọ ya ụgwọ ọrụ." Mgbe Eze Sọl nupụụrụ Chineke isi, azịza ya abụghị azịza (1 Samuel 28: 6).
Inwe obi abụọ dị iche n’ịjụ ọchịchị Chineke na ịkatọ àgwà ya. Ajụjụ nke eziokwu abụghị mmehie, mana obi nke na-enupụ isi na nke na-enyo enyo bụ onye mmehie. Onye-nwe-anyị anaghị atụ-ụjọ n’ajụjụ ma na-akpọ ndị mmadụ ka ha bịa bụrụ ezigbo ndị-enyi Ya. Akparamagwa obi anyị, nke Onye-nwe-anyị na-ahụ, na-ekpebi ma ọ dị mma ma ọ dị njọ ịjụ ya ajụjụ.
Ya mere, gịnị na-eme ihe mmehie?
N’esemokwu n’ajụjụ a bụ ihe Akwụkwọ Nsọ na-ekwupụta hoo haa na ọ bụ mmehie na ihe ndị ahụ Akwụkwọ Nsọ na-ekwughi hoo haa dị ka mmehie. Akwụkwọ Nsọ na-enye ndepụta dị iche iche nke mmehie na Ilu 6: 16-19, 1 Ndị Kọrịnt 6: 9-10 na Ndị Galetia 5: 19-21. Akụkụ Akwụkwọ Nsọ ndị a na-egosipụta ọrụ ndị ha kọwara dị ka mmehie.
Gịnị Ka M Kwesịrị Ime Mgbe M malitere Questionjụ Chineke Ajụjụ?
Ajụjụ kachasị sie ike ebe a bụ ịchọpụta ihe bụ mmehie na mpaghara nke Akwụkwọ Nsọ anaghị ekwu okwu. Dịka ọmụmaatụ, mgbe Akwụkwọ Nsọ anaghị ekwu maka otu isiokwu, dịka ọmụmaatụ, anyị nwere ụkpụrụ nke Okwu iji duzie ndị Chineke.
Ọ dị mma ịjụ ma ọ bụrụ na ihe adịghị, mana ọ ka mma ịjụ ma ọ dị mma. Ndị Kọlọsi 4: 5 na-akụziri ndị Chineke na ha kwesịrị "iji ohere ọ bụla mee ihe." Ndụ anyị bụ naanị anwụrụ, yabụ anyị kwesịrị ilekwasị anya na ndụ anyị na "ihe bara uru maka iwuli ndị ọzọ elu dịka mkpa ha si dị" (Ndị Efesọs 4:29).
Iji lelee ma ihe ọ bụla dị mma ma ọ bụrụ na ị ga-eji akọ na uche mee ya, ọ bụrụkwa na ị rịọ Onyenwe anyị ka ọ gọzie ihe ahụ, ọ kachasị mma ịtụle ihe ị na-eme na 1 Ndị Kọrịnt 10:31, "Ya mere, ma ị na-eri ma ọ bụ ihe ọ drinkụ drinkụ, ma ọ bụ ihe ọ bụla ị na-eme, na-eme ya niile maka ebube Chineke “. Ọ bụrụ na i nwewe obi abụọ ma ọ ga-eme Chineke obi ụtọ ma i were 1 Ndị Kọrịnt 10:31 leba anya ná mkpebi i mere, i kwesịrị ịhapụ ya.
Ndị Rom 14:23 na-ekwu, "Ihe ọ bụla nke na-esiteghị n'okwukwe bụ mmehie." Akụkụ nile nke ndụ anyị bụ nke Onyenwe anyị, n'ihi na a gbapụtala anyị, anyị bụkwa nke ya (1 Ndị Kọrịnt 6: 19-20). Eziokwu nke Akwụkwọ Nsọ gara aga ekwesịghị iduzi ọ bụghị naanị ihe anyị na-eme kamakwa ebe anyị na-aga na ndụ anyị dịka Ndị Kraịst.
Dịka anyị na-atụle ịtụle omume anyị, anyị ga-eme ya n'ihe metụtara Onyenwe anyị na mmetụta ha na ezi na ụlọ anyị, ndị enyi anyị, na ndị ọzọ. Ọ bụ ezie na omume ma ọ bụ omume anyị enweghị ike imerụ onwe anyị ahụ, ha nwere ike imerụ onye ọzọ. N’ebe a anyị chọrọ ezi uche na amamihe nke ndị ụkọchukwu anyị tozuru oke na ndị nsọ nọ n’ọgbakọ anyị, ka anyị ghara ime ka ndị ọzọ mebie akọ na uche ha (Ndị Rom 14:21; 15: 1).
Nke kachasi mkpa bụ na Jisus Kraist bụ Onye-nwe na nzọpụta nke ndị nke Chineke, yabụ na ọdịghị ihe kwesiri ibute Onye-nwe anyị ụzọ na ndụ anyị. Enweghị oke ọchịchọ, omume ma ọ bụ ntụrụndụ kwesịrị inwe mmetụta na-enweghị isi na ndụ anyị, dịka naanị Kraịst kwesịrị inwe ikike ahụ na ndụ Ndị Kraịst anyị (1 Ndị Kọrịnt 6:12; Ndị Kọlọsi 3:17).
Kedu ihe dị iche na ịjụ ajụjụ na inwe obi abụọ?
Obi abụọ bụ ahụmịhe onye ọ bụla bi. Ọbụna ndị nwere okwukwe n’ime Onyenwe anyị na-agbasi mgba ike ka oge na-aga na m na-enwe obi abụọ ma na-agwa nwoke ahụ na Mak 9:24: “Ekwere m; nyere m aka ikwenye! Fọdụ ndị nwere nnukwu obi abụọ na-egbochi ha, ebe ndị ọzọ na-ahụta ya dịka mbempe na ndu. Ndị ọzọkwa na-ahụ obi abụọ dị ka ihe mgbochi iji merie.
Omuma ndi mmadu kwuru na enweghi obi iru ala, odi nkpa na ndu. Rene Descartes kwuru otu oge, sị: "Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịbụ ezigbo onye na-achọ eziokwu, ọ dị mkpa na opekata mpe otu oge na ndụ gị, nwee obi abụọ, otu ị nwere ike, n'ihe niile." N'otu aka ahụ, onye guzobere okpukpe Buddha kwuru n'otu oge, sị: “Na-enwe obi abụọ n'ihe niile. Chọta ìhè gị. “Dị ka Ndị Kraịst, ọ bụrụ na anyị agbasoo ndụmọdụ ha, anyị kwesịrị inwe obi abụọ banyere ihe ha kwuru, bụ́ nke na-emegide onwe ya. Ya mere, kama ịgbaso ndụmọdụ nke ndị nwere obi abụọ na ndị ozizi ụgha, ka anyị lee ihe Bible na-ekwu.
Enwere ike ịkọwa obi abụọ dị ka enweghị obi ike ma ọ bụ tụlee ihe na-atụghị anya ya. Na oge mbụ anyị hụrụ obi abụọ na Jenesis 3 mgbe Setan nwara Iv. N’ebe ahụ, Onye-nwe nyere iwu ka ị ghara iri mkpụrụ sitere n’osisi ịma ezi ihe na ihe ọjọọ ma kọwaa ihe ga-esi na nnupụisi pụta. Setan mere ka Iv nwewe obi abụọ mgbe ọ jụrụ, sị, 'Chineke ọ̀ sịrị n'ezie,' Unu agaghị eri mkpụrụ sitere n'osisi ọ bụla dị n'ubi a '? (Jenesis 3: 3).
Setan chọrọ Iv ka ọ ghara inwe ntụkwasị obi na iwu Chineke. Mgbe Iv kwusiri ike na iwu Chineke, gụnyere ihe ga-esi na ya pụta, Setan zaghachiri na agọ, nke bụ nkwuwa okwu siri ike karị: "will gaghị anwụ." Obi abụọ bụ ngwá ọrụ nke Setan iji mee ka ndị Chineke ghara ịtụkwasị obi n'Okwu Chineke ma were ikpe Ya dị ka ihe na-agaghị ekwe omume.
Ta nke mmehie ụmụ mmadụ esiteghị n’aka Setan, kama ọ bụ ụmụ mmadụ. Mgbe mmụọ ozi nke Onye-nwe letara Zekaraịa, a gwara ya na ọ ga-amụ nwa nwoke (Luk 1: 11-17), mana o nwere obi abụọ n’okwu e nyere ya. Nzaghachi ya nwere obi abụọ n’ihi afọ ndụ ya, mmụọ ozi ahụ zara ya, na-agwa ya na ọ ga-ada ogbi ruo ụbọchị ahụ nkwa nke Chineke mezuru (Luk 1: 18-20). Zekaraịa nwere obi abụọ na Chineke agaghị emerili ihe mgbochi ndị sitere n'okike.
Ọgwụgwọ nke obi abụọ
Mgbe obula anyi kwere ka ihe mere mmadu jiri kpuchie okwukwe n'okwukwe, ihe nkea bu obi ojoo. N’agbanyeghi ihe kpatara anyi, Onye-nwe emegoro amamihe nke uwa nzuzu (1 Ndi Korint 1:20). Ọbụna atụmatụ Chineke nke dịka nzuzu maara ihe karịa atụmatụ nke mmadụ. Okwukwe bụ ingtụkwasị Onyenwe anyị obi ọbụlagodi mgbe atụmatụ Ya megidere ahụmịhe mmadụ ma ọ bụ echiche ya.
Akwụkwọ Nsọ megidere echiche mmadụ nke nwere obi abụọ na ndụ dị mkpa, dị ka Renée Descartes si kuzie, ma na-akụzi na obi abụọ bụ mbibi nke ndụ. James 1: 5-8 na-ekwusi ike na mgbe ndi nke Chineke juo Onye-nwe-ayi amamihe, ha aghaghi ịrịọ ya n’okwukwe, obi abụọ adịghị ya. E kwuwerị, ọ bụrụ na Ndị Kraịst enwee obi abụọ na Chineke na-aza, olee uru ọ bara ịjụ ya? Onye-nwe-anyị kwuru na ọ bụrụ na anyị enwee obi abụọ mgbe anyị na-arịọ Ya, anyị agaghị enweta ihe ọbụla site n’aka Ya, nihi na anyị enweghị ntụkwasị obi. James 1: 6, "Kama jụọ n'okwukwe, n'enweghị obi abụọ, n'ihi na onye nwere obi abụọ dị ka ebili mmiri nke oké osimiri nke ifufe na-akwagharị ma na-eme ka ọ maa jijiji."
Ọgwụgwọ nke inwe obi abụọ bụ okwukwe n’ime Onyenwe anyị na Okwu ya, ebe okwukwe si n’ịnụ Okwu Chineke (Ndị Rom 10:17). Onye-nwe-anyị na-eji okwu ahụ n’ime ndụ nke ndị Chineke iji nyere ha aka ito eto n’amara Chineke, Ndị Kraịst kwesiri icheta otu Onye-nwe-anyị si rụọ ọrụ n’oge gara aga n’ihi na nke a na-akọwa etu Ọ ga-esi rụọ ọrụ na ndụ ha n’ọdịnihu.
Abụ Ọma 77:11 kwuru, sị, “M ga-echeta ọrụ niile nke Jehova; e, m ga-echeta ọrụ-ebube gị nile site na mgbe ochie. Iji nwee okwukwe n’Onyenwe anyị, Onye Kraịst ọ bụla aghaghi ịmụ Akwụkwọ Nsọ, n’ihi na ọ bụ n’ime Akwụkwọ Nsọ ka Onyenwe anyị kpughere onwe ya. Ozugbo anyi matara ihe Onye nwe anyi meworo n’oge gara aga, ihe okwere ndi ya nkwa n’oge ugbu a, na ihe ha nwere ike icho ya n’aka ya n’odinihu, ha puru ime ihe n’okwukwe karia inwe obi abua.
Olee ụfọdụ ndị a kọrọ akụkọ ha na Baịbụl jụrụ Chineke?
Enwere otutu ihe omuma atu ndi ayi nwere ike iji obi abua di na Baibul, ma ufodu ndi a ma ama bu Tomas, Gideon, Sera, na Abraham na-achi ochi nkwa nke Chineke.
Tọmọs ji ọtụtụ afọ hụ ọrụ ebube Jizọs ma mụta ihe n'ụkwụ ya. Ma, obi abụọ adịghị ya na nna ya ukwu si n’ọnwụ bilie. Otu izu gabigara tupu ya ahụ Jizọs, oge mgbe obi abụọ na ajụjụ malitere ya. Mgbe Tomas mesịrị hụ Onye-nwe-anyị Jisus bilitere n’ọnwụ, obi abụọ ya nile ka ọ gafee (Jọn 20: 24–29).
Gideon nwere obi-abụọ na Onye-nwe-anyị nwere ike iji ya wezuga ihu-igwe megide ndị na-emegbu Onye-nwe. Ọ nwalere Onyenwe anyị ugboro abụọ, na-ama ya aka ka o gosi ịbụ onye a pụrụ ịtụkwasị obi site n'ọtụtụ ọrụ ebube. Naanị mgbe ahụ ka Gidiọn ga-asọpụrụ Ya. Onye-nwe soro Gidiọn na, site n’aka ya, duru ụmụ Israel inwe mmeri (Ndị-Ikpe 6:36).
Ebreham na nwunye ya Sera bụ mmadụ abụọ a ma ama na Baịbụl. Mmo mbiba ema ekop uyo Abasi ke ofuri eyo uwem mmo. Ka o sina dị, a pụghị ime ka ha kwenye ikwere nkwa Chineke kwere na ha ga-amụ nwa n'agadi. Mgbe ha natara nkwa a, ha abụọ chịrị ọchị maka atụmanya ahụ. Ozugbo amuru nwa ha nwoke, Aisak, ntukwasi obi Abraham nwere n’ebe Jehova no toro nke na o jiri obi ya nye nwa ya nwoke Isak ka o buru ihe nchu aja (Jenesis 17: 17-22; 18: 10-15).
Ndị Hibru 11: 1 na-ekwu, "okwukwe bụ mmesi obi ike nke ihe ndị a na-ele anya ha, nkwenye nke ihe a na-ahụghị anya." Nnyịn imekeme n̄ko ndinyene mbuọtidem ke mme n̄kpọ oro nnyịn m cannotkemeke ndikụt koro Abasi owụtde idem nte anam-akpanikọ, enen, ye ukeme.
Ndị Kraịst nwere ọrụ dị nsọ nke ịkpọsa Okwu Chineke n’oge na mgbe kwesịrị ekwesị, nke na-achọ ichesi echiche ike banyere ihe Bible bụ na ihe ọ na-akụzi. Chineke enyela Okwu ya ka ndi Kraist gụọ, mụọ, tulee, ma kpọsaa nye ụwa. Dị ka ndị nke Chineke, anyị na-egwu ala n'ime Akwụkwọ Nsọ ma na-ajụ ajụjụ anyị site na ntụkwasị obi n'Okwu Chineke e kpughere ka anyị wee too n'amara Chineke ma soro ndị ọzọ na-agbagha mgbagha na ụka anyị.